नेपाल आज | ज्योती मगरका रोचक रोचक अनुभव, रोल्पादेखि विदेशसम्मको यात्रामा यस्तोसम्म भएछ
अन्तरवार्ता कला साहित्य मनोरञ्जन
परिवारमा को - को हुनुहुन्छ ?
परिवारमा गन्नुपर्छ किनभने सदस्य बढेको छ । बाबा, आम, भाइ, दिदी हुनुनुन्छ ।
खासमा नेपाली मौलिक गीत भनेर कसरी छुट्टाउने भन्ने समस्या छ । दोहारी भाका भनेको जुनसुकैमा पनि हुन सक्छ । त्यो आधुनिकमा पनि हुन सक्छ, भजनमा पनि हुन सक्छ र लोकमा पनि हुन सक्छ । लोकमा पनि सास्कृतिक लोक पनि हुन सक्छ । आफ्नो आफ्नो ठाउँको विधाहरु छुट्टा छुट्टै छ । एक त त्यो कुराहरुलाई हामीले छुट्टाउन सकेका छैनौं । दास्रो कुरा लोक दोहारीलाई हाम्रो संस्कृतिको रुपमा मानिन्छ । यदि त्यस्तो भन्ने हो र लुगा लगाइमा परिवर्तन आउनु हुँदैन भन्ने हो भने पश्चिमको सुर्खेतमा पैछरि नाच, टप्पा नाचहरु राउटेहरुले नाच्छ । हामीले पनि त्यहि ड्रेसमा नाचे भइहाल्यो नि त । (हाँस्दै) त्यहि ड्रेस र तिनीहरुको सस्ंकृतिबाट पनि हाम्रोमा थुप्रै गीत संगीतहरु आएको छ । राउटेको सस्कृतिबाट आएको छ, सुदुर पश्चिमको संस्कृतिबाट आएको छ, पूर्वबाट आएको छ ।
यो समयको खेल हो । समय विस्तारै परिवर्तन हुन्छ । हिजोको दिनहरुमा हाम्रो बजैहरुको पालामा सारी पनि कमैले लगाउनुहुन्थ्यो । मलाई जहाँसम्म लाग्छ लुङ्गीहरु छिपुगुनिहरु लगाउनुहुन्थ्यो । सारीबाट आएर अहिले हजुरआमाहरु जिन्समा झरिसक्नुभयो । भनेपछि हामी त अहिले एक्काइसौँ सताब्दीका युवा पुस्ता हौँ हामी भनेका । त्यसैले मलाई लुगाले गीत संगीतमा केहि फरक पार्छ जस्तो लाग्दैन । यो सबै समयको खेल हो । समय अनुसार गीतहरुमा पनि परिवर्तन हुन्छ । गीत परिवर्तन भइसकेपछि विषयवस्तु परिवर्तन हुन्छ र विषयवस्तु परिवर्तन भइसकेपछि कपडा परिवर्तन हुन्छ ।
तीज आउँदै छ, ढाडे बिरालोलाई टक्कर दिएर कुनै गीत आउँदै छ कि छैन ?
यस्तो छ । मैले अहिलेसम्म कुनै पनि काम अरुलाई टक्कर दिने गरि गरेको छैन । तछाड मछाड पनि गरेको छैन । रिस्क लिएरर काम गर्ने मान्छे हो म । यहाँसम्म आउनको लागि दश वर्ष पनि लाग्यो किनभने मसगैँ सङघर्ष गर्ने मान्छेहरु दुइचार वर्षमा पनि हिट हुनुभयो । मलाई भने दश वर्ष लाग्यो । मलाई के गीत चल्छ भन्ने कुराहरुसगँ मतलब हुंदैन । मनमा के आउँछ त्यहि नै गर्ने हो ।
प्रेम प्रस्तावहरु मलाई अहिले भन्दा पनि पहिले बढी आउँथ्यो । केटाहरुले जसलाई हेप्छन्, उनीहरुलाई प्रस्ताव गर्छन् । बाटोमा हिड्दा पनि जो केटिहरु लजाएर हिड्ने गर्छे, त्यसलाई नै केटाहरुले बढी जिस्काउने गर्छन् । त्यसरी नहिड्ने, ढुक्कले हिड्नुपर्छ । यो मेरो पनि देश हो, म पनि यो देशको नागरिक हो भन्ने हिसाबले हिड्नुपर्छ । मन पराउनेहरु त हुनुहुन्छ । धेरैले प्रेम प्रस्ताव राख्नुहुन्छ । यो त कलाकारको लागि समिान्य कुरा हो । त्यो एकदम ठूलो कुरा पनि होइन । मलाई एकपटक कसैले प्रस्ताव राख्यो भने दास्रो पटक राख्ने हिम्मत पनि गर्दैन । म सिधा कुरा गरिदिन्छु । प्रस्ताव आयो भन्दैमा फुर्किने र मख्ख पर्ने गर्दिन ।
hot and sexy jyoti magar interview with jyoti magar nepalaaja with jyoti magar